Ụbọchị My Pet » Olee otú Iji Ụbọchị – Old School Style
Olee otú Iji Ụbọchị – Old School Style
emelitere ikpeazụ: Sep. 17 2020 | 3 min agụ
Uru mgbakwunye na-ewere ihe fọrọ nke nta niile, site na ndagwurugwu mango ihe ọṅụṅụ nke ugbu a nwere kwukwara calcium, ka nri ụlọ ahịa nke akanyam ngwaahịa nke e mere na mma formulas. Ma, e nwere ndị ka na-amasị ochie akwụkwọ, ọbụna mgbe ọ na-abịa mmekọrịta?
Otú ọ dị, nwere ike Devid agụghị ndị gbara mmekọrịta ndụmọdụ ka na mmiri na ọhụrụ-afọ mantras? Ọ dị ka oké ọnụ ahịa dị ka ọlaedo? Ka anyị chọpụta.
Nọgidenụ na-chivalry ndụ
Jụọ di na nwunye ọ bụla, emi ke a ogologo oge na-aga nke ọma mmekọrịta banyere ihe mere ha pịa ma ha ga-yikarịrị banyere ùgwù na ha nọgidere na-enwe n'ihi na onye ọ bụla ọzọ. Dị nnọọ n'ihi na ndị inyom na-alụ ọgụ maka ohiha ụbọchị ọ bụla, apụtaghị na ha na-alụ ọgụ chivalry. A nwaanyị ka ga-n'anya na-a mmekọrịta a nwa amadi na-akwusila oche ma ọ bụ ọbụna ga-emepe ụzọ maka ha. Ime nke a n'ihi na nwaanyị na-egosi nkwanye ùgwù na ọ bụ ihe a ga-aka iso ọbụna mgbe alụmdi na nwunye.
Unu na-ehi ụra na-ewe iwe
Di na nwunye ndị nwere esemokwu mgbe niile kwesịrị na-agbalị idozi ya nwayọọ tupu akpọ ya a n'abalị. Otú ọ dị, tupu otu onye nwere ike idozi ihe iseokwu, ọ dị mkpa ka wetuo obi mbụ, dị ka na-agbalị ịchọta ihe ngwọta na a n'obi na-elu-ala ga na-aka njọ ọnọdụ. Ha kwesịkwara icheta na esemokwu mere na onye ha na-na ịhụnanya na na onye ha na-asọpụrụ, otú ya mkpa iji dozie okwu ahụ n'ụzọ udo.
Mgbe mmadụ abụọ na-amalite mkpakọrịta nwoke na nwaanyị, ha na-eme mgbalị iji hụ na ọ bụla oge na-ele pụrụ iche, asa na na ịhụnanya . N'ihi na mmekọrịta-adịru ogologo, Otú ọ dị, di na nwunye kwesịrị ịgbalịsi ike ịnọgide na-enwe otu larịị nke nkwa. All mmekọrịta nwere lee njem, nke bụ nnọọ nkịtị. Otú ọ dị, ha kwesịrị mgbe ka mmekọrịta na-n'oche azụ. Ha kwesịrị ịnọgide na-enwe mmekọrịta na otu ume dị ka tupu, n'ihi na ọ bụ ihe ndị nọ na-ha ọnụ n'oge ahụ, ma ka nwere ike na-ha ọnụ n'oge na-abịa.
Gbalịa ka ka otu ụbọchị gafee site na-enweghị na-ekere òkè a pụrụ iche otito. Ọ pụrụ ịbụ a otito na otú onye gị na anya, otú ha na-esi isi ma ọ bụ ọbụna otú ihe ha na-enwe ekele. Gwa ha ka ha na ha na-dị oké ọnụ ahịa karịa ọlaedo. Ihe kasị mkpa bụ n'ihi na otu onye na-ezi obi ha na Ekele. Ọ bụ ndị a dị nta ihe na-eme ka mmekọrịta bara uru. Ndụmọdụ a nwere ike ịbụ Devid agụghị ndị gbara , ma ọ na-arụ ọrụ ebube maka ihe niile ugbu a mmekọrịta.
Ekekọrịta a goodbye nsusu
Ihe dị ka na-ekere òkè a goodbye nsusu ọnụ nwere ike ụda mfe otú ahụ na-adịghị mkpa maka a di na nwunye na-anụ ụtọ ha na mmekọrịta, ọ pụtara na a otutu ma doo n'azụ a otutu ịhụnanya. Ịkekọrịta a goodbye nsusu ọnụ bụ otu n'ime ụzọ kasị mma isi na-egosi otú mmetụta ịhụnanya onye pụrụ ịbụ na ha na onye òtù ọlụlụ. Ọzọkwa, eme nke a kwa ụbọchị na-enyere aka na-ewusi mmekọrịta, dị ka ọ na-egosipụta ịhụnanya ha na-eche maka onye ọ bụla ọzọ.
Were nri ọnụ
Ewere nri ọnụ enyere aka na-nkekọ dị n'etiti di na nwunye siri ike na tozuru okè. Zere ọnọdụ ebe otu onye na-eri na ụlọ iri, mgbe onye nke ọzọ bụ na iban ụlọ, na-ekiri telivishọn. Nke a abụghị ike maka uto nke ọ bụla mmekọrịta. Inweta nri ọnụ na-enye di na nwunye a ohere ikori. Otú ọ dị, ịhụ na nkata kwesịrị ime ka nri dị ụtọ otu, nke pụtara isiokwu na-eme ka esemokwu na arụmụka kwesịrị izere. Ihe kachasi mkpa na-ewere nri ọnụ bụ iji zuru ike, otú họrọ fun isiokwu ikori banyere.
Ịnọgide na-enwe mara mma anya mgbe niile
Otu mgbe niile kwesịrị ịbụ njikere ịga ihe mmezi mile site n'imeziwanye ọdịdị ha, ka anya ọma n'ihi na ha na onye òtù ọlụlụ. Na na na, otú eleghị anya yiri uwe esere ha na a uwe ma ọ bụ a mmanya uwe nwere ike ọ gaghị ada ala mgbe nile, ma na-edebe onwe ha ọcha, ezi-na-achọ na mma-na-etinye ọnụ dị mkpa. Ọ na-adịghị ewe oke mgbalị dị ukwuu anya ọma n'ihi na otu onye si ibe, karịsịa ma ọ bụrụ na nke a ga-enyere na ike nke mmekọrịta, dị ka onye ọ bụla nke mmekọ ga-enwe ike ịnọgide na-ahuhu maka onye ọ bụla ọzọ dị ndụ.
E nweghị ụzọ ka mma isi na-egosi na ndị agadi na-gold karịa site ndị a mmekọrịta na-adụ ọdụ. Gold bụ a dị oké ọnụ ahịa metal na nnọọ oké ọnụ ahịa. N'otu ume, ndị a Devid agụghị ndị gbara na-adụ ọdụ bụ nnọọ ihe bara uru ugbu a mmekọrịta. Ya mere, ọ dị mkpa ka onye ọ bụla dị a mmekọrịta na-eme ndị a Atụmatụ na-ebua ndụ ruo mgbe ebighị ebi.